भर्खरै बिमानस्थलबाट दिल्लीका लागि उडेको विमान दुर्घटना ! मृतक पर्ती (RIP) लेख्नुहोला ,! – Namaste Host
February 9, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on भर्खरै बिमानस्थलबाट दिल्लीका लागि उडेको विमान दुर्घटना ! मृतक पर्ती (RIP) लेख्नुहोला ,!
बिमान सडकमा उत्रियो, सबै यात्रु सकुशल तेहरान (एजेन्सी) । इरानी यात्रुबाहक बिमान बान्दर–ए–मासार बिमानस्थलमा सोमबार अवतरण गर्नेक्रममा उछिट्टिएर नजिककै सडकमा आकस्मिक अवतरण गरेको इरानी अधिकारीहरुले बताएका छन् । राज्य सञ्चालित टेलिभिजनले स्थानीय अधिकारीहरुको भनाई उद्धृत गर्दै बिमानमा सवार यात्रुसमेत चालक दलका सबै सदस्य सकुशल रहेको जनाएको छ ।